ANTSIRANANA : Nankalaza fetim-pirenena ireo kaomoriana folo andro taorian’ny antsika
Folo andro taty aorian’ny nahavitana ny fankalazana ny faha 58 taona nahazoana ny fahaleovantenan’i Madagasikara no fantatra fa nankalaza ny azy ireo ihany koa ny firenena Kaomoriana ny 6 jolay teo. 9 juillet 2018
Tsiahivina fa ny 6 jolay 1975 no fantatra fa nahazoan’ny Nosy Kaomoro ny fahaleovantenany. Na dia lavitra ny firenena niaviany aza ireo Kaomoriana monina aty Antsiranana dia mba nankalaza ny fetiny ihany koa. Nifanandrify ny andro zoma izany ka vavaka fanompoana swalat no nataon’ireo teratany Kaomoriana, tao amin’ny moske ajojo teo amin’ny lalana Ankarana.
Voaravaka araka izany ny moske izay narahana fanofahofana sainam-pirenena ho an’i Kaomoro. Nitohy ny sabotsy 7 jolay ny fety nataon’ireto farany taty Antsiranana. Lalao isan-karazany narahina hira sy dihy teo amin’ny lalana Fianarantsoa iny. Hita araka izany fa nanome lanja ny firenena niaviany ireo kaomoriana monina aty Antsiranana, tamin’ny fankalazana ny 6 jolay, fetim-pirenena ho azy ireo. Fantatra araka izany fa ny faha 14 jolay ihany koa ny fankalazana ny fetim-pirenena Frantsay. Samy manana ny daty fankalazana ny fetiny araka izany ny firenena tsirairay.
Nanamarika izany koa ireo kaomorianina monina any Mahajanga
Tao amin’ny restaurant les roches rouges Mahajanga no nifampitaona ireo kaomoriana maro nankalaza ny fetim-pireneny ny tolakandron’ny zoma 06 jolay lasa teo. Feno 43 taona tokoa izay ny nahazoan’izy ireo ny fahaleovantenany ka nanamarika izany ireto mpiavy avy any amin’ity nosy rahavavy iray manakaiky an’i Mahajanga ity. Naresaka ny lanonana nialohavan’ireo kabary nifandimbiasana maro lafy, izay notarihin’ny kaonsilan’ny Kaomoro. Notronon’ireo ambaratongam-pahefana eto Mahajanga izy ireo. Ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin’ny nosy roa tonta no tena nivoitra nandritra ireo kabary maro samihafa natao tao.
Tsy heverina ho mpila ravinahitra intsony ireo kaomoriana raha ny eto Mahajanga manokana satria dia efa afaka mifanisa amin’ireo malagasy eto an-toerana izy ireo, ary misy mihintsy aza no efa nifanapaka fianakaviana tamin’izy ireo, ka manambady kaomoriana ny gasy vavy sasany eto an-toerana. Hitohy koa ny fiaraha-miasa, araka ny nambaran’ireo tomponandraikitra roa tonta dia ny kaonsilan’i Kaomoro sy ny lehiben’ny faritra Boeny i Said Ahamad Jafar, izay nanotrona ity lanonana makotroka ity. Nifaly havanja ny rehetra ary nikorana tao anatin’ny firahalahina tanteraka ireto kaomoriana mivelona sy monina eto Mahajanga nanantan teraka io tsingerin-taona nahazoan’izy ireo ny fahaleovantena tamin’io 06 jolay io.
Nangonin’i Mpanjono sy Vanessa